မျောက်ဥပုသ် ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:43 PM | No မှတ်ချက် | Sandarwara Tdk
တစ်ခါက မျောက်အုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် မျောက်ဟာ သူ့ငယ်သားမျောက်တွေကို စုဝေးစေပြီး တရားဓမ္မ ဟောပြပါသတဲ့။ သူက
"ငါ မနေ့က လူတွေနေတဲ့ ရွာက ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးက မန်ကျည်းပင်ပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်။ ငါမန်ကျည်းသီးစားနေတုန်း ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲက ဘုန်းကြီးရဲ့တရားဟာ ငါ့ကို သတိသံဝေဂ ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီတရားကို မင်းတို့ကိုလည်းငါပြန်ဟောပြမယ်" လို့ပြောရင်း ဘုန်းကြီးရဲ့ဟန်ပန်အတိုင်း ချောင်းဟန့် တင်ပျဉ်ခွေထိုင်ပြီး သူကြားခဲ့ရတဲ့တရားကို ပြန်လည်ဟောပြခဲ့ပါသတဲ့..။
အဲဒီလို မျောက်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ တရားကို နာပြီးတဲ့နောက်မှာ မျောက်တွေဟာလည်း
လူတွေပြုမူပုံ ပြုမူနည်းအတိုင်း ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ကြဖို့ သဘောတူကြပါသတဲ့။ အဲဒီအခါ မျောက်ခေါင်းဆောင်က ဒီလိုပြောတယ်
"ငါတို့ ဥပုသ်စောင့်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ ဒါပေမယ့် ဥပုသ်ထွက်တဲ့အခါ ဗိုက်ဆာပြီး အားနည်းနေကြမှာပဲ အဲဒီတော့ ဥပုသ်ထွက်တဲ့အခါ စားဖို့အတွက် အစားအစာကို ကြိုတင်ရှာထားကြရင် ကောင်းမယ်"
အဲဒီအခါ မျောက်တွေဟာ ငယ်ရွယ် သန်မာတဲ့မျောက်တွေကို စေလွှတ်ပြီး အစားအစာ ရှာဖွေစေတယ်။ အစာရှာဖွေတဲ့မျောက်တွေ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ မှည့်ဝင်းမွှေးကြိုင်နေတဲ့ ငှက်ပျောခိုင်တွေ ပါလာကြတယ်။ မျောက်တွေက ငှက်ပျောသီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အရသာရှိပြီး စားလို့ကောင်းမယ်ဆိုတာကို သိနေကြတယ်။ ဥပုသ် စောင့်ဖို့ထက် ဥပုသ်ထွက်တဲ့အခါ ငှက်ပျောသီး စားဖို့ကို ပိုပြီး စိတ်ထက်သန်လာကြပြန်တယ်။ အဲဒီလို ငှက်ပျောသီးတွေကို မြင်တဲ့အခါ မျောက်အုပ်ထဲက မျောက်အိုကြီးတစ်ကောင်က
"ငါတို့ငှက်ပျောသီးတွေကို ဒီနေရာမှာထားမယ့်အစား ကိုယ့်ဝေစုအလိုက် ကြိုတင်ဝေငှထားရင် မကောင်းဘူးလား။ ဒါမှ ဥပုသ်ထွက်တဲ့အခါ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတာပေါ့" လို့ပြောပြန်တယ်။
"ဒီလို ဝေစု ခွဲပြီးနေမှတော့ မထူးတော့ပါဘူး.. တစ်ခါတည်း အခွံပါနွှာထားလိုက်ကြရအောင်။ ဥပုသ် ထွက်တာနဲ့ အသင့်ကောက်စားလိုက်ရုံပဲ"
"ကျနော်ငှက်ပျောသီးကို အခွံနွှာပြီး ဘယ်နားထားရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။ ကျနော့်ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး သိမ်းထားလို့ရမလားမသိဘူး။ ကျနော် မျိုမချဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်" လို့ပြောပြန်တယ်။ အဲဒီအခါ မျောက်ခေါင်းဆောင်က
"မထူးတော့ပါဘူးကွာ.. အားလုံးပါးစပ်ထဲမှာ ငှက်ပျောသီးတွေ ထည့်ထားကြ၊ မြိုတော့ မချကြနဲ့" လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ မျောက်တွေဟာ ငှက်ပျောသီးတွေကို ပါးစပ်ထဲမှာ ငုံပြီး ဥပုသ်စောင့်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်ကာလမှာပဲ မျောက်တွေအားလုံးရဲ့ ပါးစပ်ထဲက
ငှက်ပျောသီးတွေ ဟာ အသီးသီး ပျောက်ကွယ်သွားကြတော့တယ်။ မျောက်တွေရဲ့ ဥပုသ်ကြီးလည်း တိတ်တဆိတ်ပဲ ပြီးဆုံးခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ ဒီပုံပြင်လေးတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မခိုင်မာခြင်း၊ စိတ်ရဲ့ မစောင့်စည်းခြင်း ကို ထောက်ပြနေတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့တွေဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို သင်ခန်းစာရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တွေးတောမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မျောက်တွေရဲ့ ဥပုသ်စောင့်လိုစိတ်နဲ့တူတဲ့ "မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်" တွေကို ချလေ့ရှိကြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်- ဒီလ ငါ "လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့အချိန်တွေလျော့မယ်"၊ "ကိုရီးရားကားကြည့်တာ အချိန်ကုန်တယ် မကြည့်တော့ဘူး"၊ "အပြင်စာတွေမစားတော့ဘူး အသုံးစရိတ်ချွေတာမယ်" "ဒီအလုပ်မပြီးမချင်း Facebook ကို ယောင်လို့တောင်လှည့်မကြည့်ဘူး" စတဲ့ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချလေ့ရှိကြတယ်။
အဲဒီလို ဥပုသ်စောင့်ခြင်းနဲ့တူတဲ့ စောင့်စည်းခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချလေ့ရှိကြပေမယ့် မခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်ကြောင့် "တစ်ခါတစ်လေ ဆိုင်ထိုင်တာတော့
ကိစ္စ မရှိပါဘူးလေ" "ဒီဇာတ်ကားလေးက မဆိုးလောက်ဘူး တစ်ပိုဒ်တစ်လေလောက်ကြည့်ရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး" "အင်း.. ဒီတစ်ကြိမ်တော့ အပြင်စာလေး စားလိုက်ဦးမှ နောက်တစ်ကြိမ်မှဆင်ခြင်တော့မယ်" "ခဏလေး Facebook ပေါ်တက်လိုက်ဦးမှ ငါးမိနစ်လောက်နဲ့ ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး" စတဲ့ Excuse တွေပေးရင်း မျောက်ဥပုသ်ကို စောင့်လေ့ရှိကြသူများပဲဖြစ်တယ်။ ငယ်စဉ်ကာလတုန်းက
လို စာသင် နှစ်စမှာ တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဟာ နှစ်လည်နဲ့ နှစ်ဆုံးမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း မျောက်ဥပုသ် ဖြစ်လာကြပြန်တယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးခါမှာ ပြန်သောက်မိတဲ့စိတ်မျိုးဟာလည်း မျောက်ဥပုသ်စိတ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။
"I don't stop when I am tired, I stop when I am done." ငါမောနေပါစေ၊ ရည်ရွယ်ချက်မပြည့်မချင်း ငါမရပ်ဘူး ဆိုတဲ့စကားလို ရည်ရွယ်ချက်မပြည့်မချင်း ခိုင်ကျည်သောစိတ်နဲ့ စောင့်စည်းဖို့၊ ကြိုးစားဖို့ လိုမှာပဲဖြစ်တယ်။
မှန်ကန်သော ဥပုသ်များ စောင့်နိုင်ကြပါစေ
မြန်မာ စာပေများ မှ